Ukuqwalasela iPC yangaphakathi yokuFikelela kwangaphandle | Martech Zone
NgoMvulo, Julayi 7, 2008 NgoLwesihlanu, ngoJanuwari 11, 2013 Douglas Karr
Ngokwamkelwa kweendonga zomlilo kunye nee-routers, ukunxibelelana kwenye ikhompyuter nge-Intanethi kuye kwaba ngumceli mngeni wokwenene. Ukuba ungathanda ukumisela ikhompyuter yakho ukuze ufikeleleko lwangaphandle lunokwenzeka, kukho utshintsho olunzulu lobumbeko ekufuneka ulwenzile kwinethiwekhi yakho.
Fumana idilesi ye-IP okanye iDynDns Idilesi
Inyathelo lokuqala lokukufumana kukufumana idilesi yakho. Kwihlabathi le-Intanethi, oku kwaziwa njengeDilesi ye-IP kwaye kunokukhangelwa ngokulula.
Fumanisa ukuba unayo idilesi ye-IP eShukumayo (engatshintshiyo) okanye yeDynamic (etshintsha) idilesi ye-IP. Amathuba kukuba ukuba unayo i-DSL okanye i-DSL Pro ukuba unedilesi ye-IP enamandla. Ukuba uku-DSL yeShishini okanye kwiModem yeCandelo, kunokwenzeka ukuba umile.
Le yidilesi ye-IP enikezelwe kwindawo yokungena kwinethiwekhi yakho. Ukuba uhleli, akukho xhala. Ukuba unamandla, sayina inkonzo enje I-DNS enamandla. Uninzi lwee-routers zangoku ziyakwazi ukunxibelelana ne-DynDNS yokugcina idilesi ye-IP ihlaziyiwe. Emva koko, endaweni yokubonelela umntu ngedilesi yakho ye-IP, uya kumnika idilesi enje nge findme.homeip.net.
Ukuba awuyazi idilesi ye-IP yangaphandle, ungasebenzisa indawo enje Yeyiphi idilesi yam ye-IP ukuyifumana.
Ping i-DynDns yakho okanye idilesi ye-IP kwaye ubone ukuba ufumana impendulo (Vula i "Command Prompt" okanye "iTheminali" kwaye usebenzise: ping findme.homeip.net
Ukuba awufumani mpendulo, unokufuna ukwenza iPinging kulungelelwaniso lomzila wakho. Jonga amaxwebhu omzila wakho.
Yenza ukuThunyelwa kwePORT kwiRouter yakho
Ngoku sinedilesi yakho, kubalulekile ukwazi ukuba yintoni emnyango ukufaka eyakho ikhaya ukugqitha. Oku kwaziwa njenge-PORT kwikhompyuter. Izicelo ezahlukeneyo zisebenzisa ii-PORTs ezahlukeneyo, ke kubalulekile ukuba sibe ne-PORT elungileyo evulekileyo kwaye ihanjiswe kwikhompyuter yakho. Ngokuzenzekelayo, uninzi lweerutha zizo zonke izibuko ezivaliweyo ukuze kungabikho mntu unokungena kwinethiwekhi yakho.
Ukuze i-PC yomthombo iqhagamshelane ne-PC ekuya kuyo, i-Router yakho kufuneka iqondise i-traffic kwi-PC yakho.
Sithethile ngokubaluleka kweDilesi ye-IP eShukumayo yenethiwekhi yakho, ngoku kubalulekile ukuba ube neDilesi ye-IP eShukumayo yePC yakho kwiNethiwekhi yangaphakathi. Jonga amaxwebhu akho eRouter ngendlela yokuqwalasela idilesi ye-IP emileyo kwiPC yakho yangaphakathi.
Kuxhomekeke kuhlobo luni lwesicelo onqwenela ukunxibelelana nalo, kuya kufuneka unike amandla ukuhanjiswa kwePORT ukusuka kwiRouter yakho ukuya kwiDilesi ye-IP yangaphakathi yePC.
I-HTTP -Ukuba unqwenela ukuqhuba iserver yewebhu kwi-PC yakho yangaphakathi kwaye uyenze ifikeleleke ngaphandle, i-PORT 80 iya kufuna ukuhanjiswa.
I-PCNaphi na-5631 kunye no-5632 kuya kufuneka idluliselwe.
I-VNC-5900 iya kudinga ukugqithiselwa (okanye ukuba ulungiselele izibuko elahlukileyo, sebenzisa leyo).
Nika amandla iisetingi zomlilo kwiPC yakho
Ezi PORTS uzithumele kwiPC yakho ziya kufuna ukwenziwa kwisoftware yeKhompyuter yakho. Jonga amaxwebhu akho e-firewall kunye nendlela yokwenza isicelo kunye / okanye amazibuko onqwenela ukufikelela kuwo ngaphandle.
Ukwenza olu tshintsho lokumisela akukho lula, kodwa nje ukuba konke kusebenze kakuhle kuya kufuneka ukwazi ukufikelela kwi-PC yakho ngokusebenzisa usetyenziso olukhethileyo naphi na apho ufuna khona.
PHAWULA: Nokuba yeyiphi na inkqubo oyisebenzisayo, qiniseka ukusebenzisa igama lomsebenzisi elinzima kunye negama lokugqitha! Abagculeli bathanda ukukhangela iinethiwekhi bekhangela amazibuko avulekileyo ukuze babone ukuba banokufikelela kunye / okanye balawule ezo PC. Ukongeza, unokuthintela iidilesi ze-IP oya kuthi ubonelele ngazo.